Tantaranà Mpifindra Monina: Fiainana Voazaran’ny Ranomasimbe Atlantika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2015 2:44 GMT
Folo taona teo izay i Natalia Carruego no nandao an'i Arzantina fireneny niaviany, ary monina any Angletera ankehitriny, toerana itaizànyamin'ny fomba amerikàna tatsimo ireo zanany vavy. Sary : Ana Hernández.
Ity no fihaonana fahadimy amin'ilay andianà antsafa itrandrahana ireo zavatra iainan'ny Amerikàna Latina izay mandao ny firenena niaviany hikatsaka fomba fiaina vaovao sy hafa, izay azonareo vakiana ato. Navoaka voalohany tao amin'ny biloagin'i Ana ity antsafa manaraka ity, ary ao anatin'ny tovana amin'io bilaogy io natokana ho an'ny antsafa. Ao anatin'ity lahatsoratra ity i Ana Hernández dia miresaka amin'i Natalia Carruego, tovovavy Arzantina nandao ny fireneny efa ho folo taona mahery lasa izao. Ho an'i Natalia Carruego, nitondra fipasahan'ny fiainana ho roa izany, nozarain'ny Ranomasimbe Atlantika.
Teraka tao Buenos Aires i Natalia Carruego. Tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Quilmes, tanànan'ny labiera. Saingy lehibe tao Temperley, any amin'ny folo kilaometatra eo ho eo miala io tanàna io, any amin'ny faritra atsimon'i Buenos Aires.
Teo amin'ny faha-16 taonany i Natalia, izay mpandihy tamin'izany, no nahazo vatsy handeha handihy any Tenerife, any Espaina. Saingy notazonin'ny fianakaviany tao Arzantina hatramin'ny faha-roapolo taonany. Nandritra izany fotoana izany no nanapahany hevitra hanandrana hitsapa samirery ny vintany. Voalohany tao Madrid, avy eo Levante. Rehefa nifandimby ny taona, nandeha nianatra momba ny fanabeazana fototra sy ny “logopédie” (fomba fanitsiana ny hadisoana amin'ny fanononana teny) i Natalia-ilay-mpandihy.
“Niala avy ao Arzantina ho any Espaina aho satria nahaliana ahy mandrakariva i Eoropa. Nandeha an-jambany tamin'izao fotsiny aho, ary raha fantatro, mety tsy nandeha aho. Nilaozako ho any Angletera indray i Espaina taorian'ny naha-banky rompitra ny orinasa niasàko ”.
Ho an'i Natalia, ny hoe mifindra monina dia “mampipoitra ny tsara sy ny ratsy ao anatin'ny tsirairay. Fantatra amin'ny heriny rehetra ilay olona. Samihafa ny fomba fiatrehana zavatra, tsy eo intsony ireo namana hatrizay, misy ny elanelana, ny tsindry sy ny finoana izay milaza hoe ny asa tsy tiantsika dia tetezana iray hahatongavana any amin'izay tiana haleha. Sarotra izany.”
Midangana be ny sarany tsy maintsy aloha raha handeha hiainana any lavitra any. Betsaka ny zavatra ilaozanao, isan'ireny ny fifankatiavana. Satria rehefa mifindra monina, tsy misy resaka afa-tsy ianao : ianao no mandrindra ny ankohonanao manontolo. Tsy fanapahana hevitra iray ho ianao irery no voakasik'izany. Na mivantana na ankolaka, dia ianao no sahala amin'ny hoe mpitsara ny rehetra, manomboka amin'izay fotoana izay, tsy hahita ny raibe sy ny renibenao intsony ianao, ny ray sy reny. Ireo namana, ireo zanaky ny iray tampo amin'ny ray sy reninao, ary tsy eo koa ireo zanaky ny iray tampo aminao.
Ary na dia matotra aza ny fifamatorana, hoy izy manohy, “tena sarotra be ny miaina miaraka amin'ny fonao mizara roa. Tsy misy andro iray mandalo ka tsy hahatsiarovako ny fianakaviako. Tahaka ny hoe tsara raha mba teo ry zareo mba afaka nahita an'itsy sy iroa, mba nahafinaritra izao raha nanatrika ny teny voalohany notononin'ny zanako vavy ry zareo.”
Tany amin'ny taona 1990, fony mbola tovovavy i Natalia, tao Buenos Aires, hafa mihitsy ny zavatra rehetra. “Tsy nisy izao tsy fandriampahalemana ankehitriny izao, tsy dia betsaka ny olona sy ny fandraharahàna ara-barotra, na ny politika aza hafa mihitsy. Amin'izao fotoana, tsy misy politika ifanotronana, tsy voafehy ny tsy fitoviana ara-tsosialy isan-karazany. Fanampin'izany, eo ny tsy fisian'ny fifandeferana sy ny kolikoly goavana, fa mandritra izany ihany, ny fitondràn'i (Cristina) Kirchner milaza fa nahavita nametraka fitoviana sosialy, na dia mifanohitra amin'izany aza ny zava-misy. Misy faritra mikatona ny sekoly ao aminy, tsy maintsy fantarina fa i Arzantina, tsy i Buenos Aires irery akory.”
Nanomboka nantsoina amin'ny anarany ihany koa ny zavatra rehetra . “Amin'izao fotoana izao, ny herisetra atao amin'ny maha-lahy na vavy dia herisetra atao amin'ny maha-lahy na vavy. Misy ny fifamatorana mandrakizay, ary mitohy miafina ny fifankatiavan'ireo mitovy taovam-pananahana nefa mifankatia ao amin'ny firenena iray izay terena ianao hifidy, raha tsy izany dia saziana raha tsy manatanteraka an'izay. Tsy maintsy manatrika ianao. Firenena iray izay ny andraikitry ny fanjakàna dia ny mampizarazara, izay ny fivoriam-pianakaviana dia miafara aminà fifandirana, izay tsy maintsy ialàna ny adihevitra tahaka itsy na iroa. Firenena iray izay amonoana ny lehiben'ny fampanoavana ny andro mialoha ny hijoroany vavolombelona.” Firenena iray izay tian'i Natalia, na eo aza izany rehetra izany na angamba noho izany mihitsy. Izay tsy mitsahatra ny fifandraisany aminy amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy, ny TV Argentina Online (TN.com) na ireo gazety toy ny La Nacion sy Clarín.
Natalia, izay monina ao Bristol, Angletera, dia manamafy fa amin'ny fomba amerikàna tatsimo no anabeazany ireo zanany vavy : tsy avelany mandray zava-pisotro misy alikaola, tsy avelany mivoaka ny trano aminà zipo manana halavàna tsy azo lazaina ho zipo intsony, ary tsy ekeny ihany koa ny hoe hiala ny tokantranony eo amin'ny faha-16 taonany, toy ny ataon'ny maro amin'ireo britanika adolantsento. Ary na ho takalozana inona eto amin'ity tany ity aza, tsy hitondra velively ny zazavavy kely vao enina taona hanamboamboatra hohon-tànana izy. “Izany rehetra izany, tsia.”
Tsy mila an'izany rehetra izany izy, ary tsy te-ho faty any Angletera ihany koa. “Te-hody aho”, hoy ity Arzantina vavy ity rehefa nametrahana fanontaniana, andro vitsy lasa izay hoe : Aiza no tianao hitodiana ?
Any an-tranonay. Toy ny hitako izany izaho any Arzantina miaraka amin'ny fianakaviako sy ireo namako. Toa hitako izany izaho miaraka amin'ireo rehetra nosakanako tsy hanatitra ahy eny amin'ny seranam-piaramanidina isak'izay handeha aho, satria sarotra be raha mankeny ry zareo, satria ao ambadik'ireny fotoana fifanaovam-beloma tsirairay ireny, mieritreritra aho hoe : “Mbola hifankahita ve izahay ?” Satria misy zavatra mitranga nefa tsy eo aho. Tsy tonga amin'inona aho, na dia faly aza satria hoe mifankatia isika ety anaty serasera, nefa ilaina ny mifankahita vatana. Mifanditra kely amin'ny neny, dada, avy eo mifamihina. Malahelo ireo fivoriam-pianakaviana miaraka amin'ny asado arzantina aho. Satria eto Angletera, dia veloma mandrakizay ireny. Mifankahafantatra aman'olona ianao, miezaka manao izay mety avy eo ry zareo lasa. Tahaka ny hoe mandalo fotsiny ny zavatra rehetra.”.
Natalia, izay sady fahatsiarovana ny fahiny no fifaliana ihany koa, dia tsy mitsahatra ny misaina hoe hitombo ary ho lehibe ireo zanany, dia hihodina indray ny kodiaran-tsarety. “Ry zareo eto, ary izaho any”.